के हुदैछ त ? माप्य–खुम्बु मितेरी मोटरेबल पुलको अवस्था - Shikhar Sandesh
मोटरेबल पुल गम्भिर त्रुटि र दिगोरुपमा सञ्चालन असम्भव भएको हो त ?
शिखरसन्देश २२ कार्तिक २०७७, शनिबार १५:३६
काठमाडौं । २०७७ मंसिर ६ गतेको दिन माप्य–खुम्बु मितेरी मोटरेबल पुलको औपचारिक उद्घाटन हुने भएको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रलाई सिधा जोड्ने गरि ओर्लाङघाटमा गत बैशाख मै निर्माण सम्पन्न भएपनि कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) का कारण उद्घाटनमा ढिलाइ भएको हो ।
सगरमाथा खुम्बु जोड्ने माप्य खुम्बु मितेरी मोटरेबल पुलको उद्घाटन प्रदेश मुख्य मन्त्री माननीय श्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री इन्द्र कुमार आङ्बो, संघीय माननीय श्री हेमकुमार राई (सुरवीर) प्रदेश माननीयद्वय श्री बुद्धि कुमार राजभण्डारी, श्री उत्तम कुमार बस्नेत, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री वीर कुमार राई लगायत स्थानियहरुको उपस्थितिमा सरकारले कोरोना–१९ महामारी नियन्त्रण गर्न बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने माप्य दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईले जानकारी दिए ।
निर्माण सम्पन्न सो मोटरेबल पुलको लम्बाई ४८ मिटर रहेको छ भने चौडाई ६ मिटर रहेको छ । उक्त पुलको क्षमता ५५ टन रहेको पुलको फाउण्डेसन पानीको सतहबाट डेढ मिटरभन्दा मुनी रहेको छ । त्यसभन्दा माथि दुईतर्फी पिलरको उचाई साढे ६ मिटर रहेको छ भने इभिडिङ प्रणालीबाट पुल निर्माण भएको सो पुलको निर्माण कार्य जलप नेपालले जिम्मा लिएको थियो । अन्ततः खुम्बु पासाङल्मु गाउँपालिका र माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाले संयुक्त रुपमा प्रदेश र संघको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेधार कोषको समेत आर्थिक सहयोगमा करिब रु. ९ करोडको लगानी सम्पन्न भएको मोटरेबल पुल गम्भिर त्रुटि र दिगोरुपमा सञ्चालन असम्भव देखिने सामाजिक सञ्जाल तिर पोष्ट गरिएको छ । यस सन्दर्भमा माप्य दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्षसँग शिखरसन्देशले गरेको कुराकानीमा सो निर्माणमा संघीय सांसद कोषमार्फत १ करोड, प्रदेश सरकारबाट २ करोड, बाँकी माप्य दुधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले ५०/५० प्रतिशतको साझेदार लगानी रहेको बताउदै उक्त मोटरेबल पुल ९ करोड ४५ लाखको डीपीआर बनेपनि टेण्डर मार्फत जलप नेपालले ७ करोड २९ लाख ९७ हजार २ सयमा काम सम्पन्न गरेको र सो पुलको आयु कम्तिमा पनि ५० वर्षभन्दा माथि रहेको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।